maanta taariikhda | RayHaber
news maanta, taariikhda tareenka
Tarihte Bugün 13 Aralık 1939 Demiryolunun Erzurum Uzunahmetler’e kadar (18,5 km) uzatılmasına dair 3745 sayılı yasa yürürlüğe girdi. 13 Aralık 2018 Ankara Yüksek Hızlı Tren kazasında 9 kişi öldü 28 [More ...]
Maanta ee Taariikhda 12 Diseembar 1901 Ziraat Bank wuxuu bilaabay inuu amaah ku siiyo Hicaz Railways. Bangigu wuxuu bixiyay amaah dhan oo ah 1908 kun oo rodol oo ah ilaa 480. 8 ee wadada tareenka ee Hejaz waxay ku timaadaa wadarta guud ee 3.919.696 lira sanadkii [More ...]
Maanta in History December 8 1874 Agop Azarian Hobollada Qaranka, sida dhismaha kooxaha line Belova-Sofia ayaa ballan qaaday inay ku dhameystaan ​​bilood 12.
Taariikhda Taariikhda 6 Diisembar 1938 Waddada tareenka u dhexeeya Adana iyo Saldhigga Adana ayaa la furay. Cenup Railways Inc. iyo dayactirka heshiiska ayaa la saxiixay.
Maanta taariikhda 5 Diseembar 2003 Qeybta koowaad ee Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara-Istanbul wuxuu bilaabay hawlihii kaabayaasha ee Esenkent-Eskişehir (206 km). 5 Diseembar 1989 TGV Atlantique wuxuu jabiyey rikoorka xawaaraha tareenka isagoo gaaraya 482,4 km / h.
Maanta taariikhda 4 Diseembar 1929 waxay go'aansadeen in ay isticmaalaan qulqulayaasha qoryaha. Dhismaha Dhiigga Dhiigga Dareemaha ayaa la aasaasay.
Maanta Taariikhda: 3 Diseembar 1918 Ingiriiska, Jarmalka
Maanta Taariikhda 3 December 1918 Boqortooyada Ingiriisku waxay u oggolaatay dadka 10 in ay joogaan dalka Boqortooyada halkii ay ka shaqeyn lahaayeen farsamayaasha Jarmalka.
Maanta oo ku taal Taariikhda 1 Disembar1928 khadka Kütahya-Tavşanlı (50 km) waxaa loo xilsaaray xaflad ay ka soo qeyb galeen Kuxigeenka Kuxigeenka Peking Recep Peker. 1 Diseembar 1930 Fevzipaşa-Diyarbakır Line ayaa gaadhay Malatya oo tareenkii ugu horreeyay ayaa soo galay. 1 Diseembar 1947 [More ...]
Maanta 30 November 1932 Ulukisla-Iiade (60 km) ayaa la furay taariikhda. Qunsuliyadaha qandaraaska Julius Berger. 30 1975 100 XNUMX waxaa laga soo saaraa Toshifatoorka Eskisehir. Hantidhoolka wuxuu ahaa adeeg.